EPL: Chelsea oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay kooxda Swansea City iyo kulamadii kale.. + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Chelsea oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay kooxda Swansea City iyo kulamadii kale.. + SAWIRRO
(London) 25 Feb 2017 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay 3-1 ku garaacday naadiga Swansea City oo marti ahayd, waxaana ay ku qabatay hoggaanka horyaalka 11-dhibcod inkastoo Man City oo ku soo xigta uu kulankeedu baaqi u yahay.
Kooxda martida loo ahaa ee Chelsea ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey 19’daqiiqo Cesc Fabregas, kaddib markii uu si qurux badan u dhammaystiray baas uu u soo dhigay Pedro Rodriguez, Blues ayaana 1-0 ku hoggaamisay ciyaarta.
Inta aan la aadin qeybta nashadaha ayaa dhammaadkii daqiiqadii dheeriga ahaa ee lagu daray waxaana laad xor ah oo uu soo karoosay Gylfi Sigurdsson, madax ku dhaliyey Fernando Llorente, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda Chelsea ayaa hoggaanka dib u soo ceshatay waxaana goolka labaad u dhaliyey 72’daqiiqo Pedro Rodriguez, kaddib baas uu ka helay Cesc Fabregas oo ka tuuray bannaanka xerada ganaaxa, Blues ayaana ciyaarta ku hoggaamisay 2-1.
Chelsea ayaa hoggaanka ciyaarta sii dheereysatay waxaana goolka saddexaad u dhaliyey 84’daqiiqo Diego Costa, kaddib kubbad uu u soo dhigay Eden Hazard oo garab ka soo xarooday kulanka ayaana waqtigii loogu tala galay ku soo dhammaaday 3-1 ay ku adkaatay Blues.
Kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka Premier League halkaan hoose ka eeg:-
Diego Simeone oo amaanay Barcelona ka hor kulankooda Barri
Samir Handanovic oo sii joogaya Inter xitaa haddii aysan u soo bixin Champions League